Maldives International Future Series မှာ ဗိုလ်လုပွဲကို တက်ရောက်သွားတဲ့ #သက်ထားသူဇာ - SPORTS MYANMAR
Maldives International Future Series မှာ ဗိုလ်လုပွဲကို တက်ရောက်သွားတဲ့ #သက်ထားသူဇာ
သက်ထားသူဇာဟာ Maldives International Future Series မှာ ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်း အစားဆုံး ကစားသမား ဖြစ်တယ်လို့ ကြိုတင် သုံးသပ်ခဲ့သည့်အတိုင်း ၊ လက်ရှိ မှာတော့ ဗိုလ်လုပွဲကို တက်ရောက်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Maldives International Future Series ဟာ ကမ္ဘာ့ ကြက်တောင် အဖွဲ့ချုပ်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပြိုင်ပွဲ အမျိုးအစားတွေထဲမှာ အနိမ့်ဆုံးအဆင့် ပြိုင်ပွဲ အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး ၊ ပေးအပ်တဲ့ ဆုကြေးက နည်းပါးတာကြောင့် အရှေ့တောင် အာရှမှာ ရှိတဲ့ နာမည်ကျော် ကြက်တောင် ကစားသမားတွေ လာရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
အမျိုးသမီး တစ်ဦးချင်းလိုက် ပြိုင်ပွဲမှာတော့ စုစုပေါင်း ပြိုင်ပွဲဝင် 25 ယောက် အထိ ရှိခဲ့ကာ ၊ အဲဒီ အထဲမှာ သက်ထားသူဇာဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက် အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၊ ကမ္ဘာ့အဆင့် 100 အတွင်း ပါဝင်တဲ့ ကစားသမားက2ယောက်သာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီပြိုင်ပွဲကို လာရောက် ယှဉ်ပြိုင် ကြတဲ့ ကစားသမား အများစုဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက် အတွက် အမှတ်ရဖို့ လာရောက် ယှဉ်ပြိုင်တဲ့သူများပြီး ၊ တစ်ချို့ဆိုရင် အဆင့် သတ်မှတ်ချက်တောင် မရရှိသေးသူတွေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကြက်တောင် အဖွဲ့ချုပ်က နောက်ဆုံးအဆင့် (Level4အဆင့်အတန်း အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပြိုင်ပွဲ အမျိုးအစားက3မျိုးအထိ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ပြိုင်ပွဲတွေကတော့ –
1. International Challenge
3. Future Series တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲ တစ်ခုကို ကျင်းပဖို့ အတွက် ခေါင်းစဉ်က International Challenge လို့ သတ်မှတ်လိုက်ရင် ၊ အဲဒီ ပြိုင်ပွဲကနေ ချီးမြှင့်မယ့် ဆုကြေး ပမာဏဟာ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ 25000 ပေးအပ်ရပါတယ်။ အဲဒီ 25000 ပမာဏ ဟာ စုစုပေါင်း ဆုကြေး ပမာဏမျိုး ဖြစ်ပြီး (အမျိုးသမီး တစ်ဦးချင်း ၊ အမျိုးသား တစ်ဦးချင်း ၊ အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်တွဲ ၊ အမျိုးသား နှစ်ယောက်တွဲ နဲ့ အရော (ကျား + မ) ) ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍ5ခုမှာ ခွဲပြီး ချီမြှင့်လေ့ရှိတာပါ။
ပြိုင်ပွဲကို International Series လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ရင်တော့ ဆုကြေးက အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ 10000 ပေးရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Myanmar International Series 2019 ပြိုင်ပွဲဟာ ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ရှိတဲ့ ပြိုင်ပွဲမျိုး ဖြစ်ပြီး ၊ သက်ထားသူဇာဟာ အမျိုးသမီး တစ်ဦးချင်းပွဲစဉ်မှာ တတိယဆု ရရှိခဲ့တာကြောင့် ဆုကြေး အဖြစ် 145 ဒေါ်လာ လက်ခံရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီး တစ်ဦးချင်း ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဆု ရရှိတဲ့ ဖာမာဝါတီ (အင်ဒိုနီးရှား) ကတော့ ဆုကြေး 750 ဒေါ်လာ ရရှိသွားခဲ့တာပါ။
Future Series ခေါင်းစဉ် နဲ့ ကျင်းပတဲ့ ပြိုင်ပွဲကတော့ အထက်ဖော်ပြပါ ပြိုင်ပွဲ အမျိုးအစားတွေထက် နိမ့်ပြီး ၊ ဆုကြေးကို အနိမ့်ဆုံး သတ်မှတ်မထားသလို ၊ အဓိက အားဖြင့် ကမ္ဘာ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက် တက်ဖို့ အတွက် လာရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့ ပြိုင်ပွဲမျိုး အဖြစ်သာ သတ်မှတ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ ဒီလို ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက် 100 အတွင်း ရပ်တည်တဲ့ ကစားသမားတွေတောင် လာရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မရှိတာပါ။
သက်ထားသူဇာကတော့ ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးချင်း ကဏ္ဍမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ရပ်တည်မှု အမြင့်ဆုံး ဖြစ်လို့ ဘိုင် ရကာ ၊ 16 ယောက် အဆင့် ရှုံးထွက် အဆင့် ကနေ စတင် ယှဉ်ပြိုင် ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အဆင့်မှာ တိုင်ပေ က ကစားသမား ယိဇုဂျိုး (ကမ္ဘာ့အဆင့် 754) ကို 21-8 ၊ 21-16 နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး ကွာတားဖိုင်နယ် အဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကွာတားဖိုင်နယ် အဆင့် ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာတော့ သက်ထားသူဟာ ဟာ အနည်းငယ် ပွဲပန်းသွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ သူမဟာ အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်တွဲ ပြိုင်ပွဲမှာလဲ လှိုင်မွန်ကြူ နဲ့ တွဲဖက် ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ စာရင်းပေးထားခဲ့တာကြောင့် အဲဒီနေ့မှာပဲ နှစ်ယောက်တွဲ ပွဲစဉ်ရော ၊ အမျိုးသမီး တစ်ဦးချင်း ကွာတားဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်ရော ကစားခဲ့ရပါတယ်။
နှစ်ယောက်တွဲ ပွဲစဉ်မှာ သီရိလင်္ကာ က အတွဲကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ၊ ကွာတားဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်မှတော့ သီရိလင်္ကာ က ကစားသမား ဟန်ဒါဟီဝါ (ကမ္ဘာ့အဆင့် 330) ကို 21-15 ၊ 21-12 တို့နဲ့ အနိုင်ယူပြီး ဆီမီးဖိုင်နယ်ကို တက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဆီမီးဖိုင်နယ် အဆင့်မှာတော့ အိန္ဒိယာ က မန်ဒါဒါ (ကမ္ဘာ့အဆင့် 148 ) ကို 21-10 ၊ 21-10 ရလာဒ်တွေ နဲ့ ကစားပြီး ၊ ဗိုလ်လုပွဲကို ဆက်လက် တက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်လုပွဲမှာတော့ ကမ္ဘာ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက်တောင် မရသေးတဲ့ အန္ဒိယ သူ ဘန်ဆော့ နဲ့ ဒီကနေ့မှာ ယှဉ်ပြိုင် ကစားသွားမှာပါ။
Maldives International Future Series မှာ ဗိုလျလုပှဲကို တကျရောကျသှားတဲ့ #သကျထားသူဇာ
သကျထားသူဇာဟာ Maldives International Future Series မှာ ဗိုလျစှဲဖို့ ရပေနျး အစားဆုံး ကစားသမား ဖွဈတယျလို့ ကွိုတငျ သုံးသပျခဲ့သညျ့အတိုငျး ၊ လကျရှိ မှာတော့ ဗိုလျလုပှဲကို တကျရောကျသှားခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။
Maldives International Future Series ဟာ ကမ်ဘာ့ ကွကျတောငျ အဖှဲ့ခြုပျက သတျမှတျထားတဲ့ ပွိုငျပှဲ အမြိုးအစားတှထေဲမှာ အနိမျ့ဆုံးအဆငျ့ ပွိုငျပှဲ အမြိုးအစား ဖွဈပွီး ၊ ပေးအပျတဲ့ ဆုကွေးက နညျးပါးတာကွောငျ့ အရှတေ့ောငျ အာရှမှာ ရှိတဲ့ နာမညျကြျော ကွကျတောငျ ကစားသမားတှေ လာရောကျ ယှဉျပွိုငျခဲ့ခွငျး မရှိပါဘူး။
အမြိုးသမီး တဈဦးခငျြးလိုကျ ပွိုငျပှဲမှာတော့ စုစုပေါငျး ပွိုငျပှဲဝငျ 25 ယောကျ အထိ ရှိခဲ့ကာ ၊ အဲဒီ အထဲမှာ သကျထားသူဇာဟာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ သတျမှတျခကျြ အမွငျ့ဆုံး ဖွဈခဲ့ပွီး ၊ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ 100 အတှငျး ပါဝငျတဲ့ ကစားသမားက2ယောကျသာ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
ဒီပွိုငျပှဲကို လာရောကျ ယှဉျပွိုငျ ကွတဲ့ ကစားသမား အမြားစုဟာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ သတျမှတျခကျြ အတှကျ အမှတျရဖို့ လာရောကျ ယှဉျပွိုငျတဲ့သူမြားပွီး ၊ တဈခြို့ဆိုရငျ အဆငျ့ သတျမှတျခကျြတောငျ မရရှိသေးသူတှေ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
ကမ်ဘာ့ကွကျတောငျ အဖှဲ့ခြုပျက နောကျဆုံးအဆငျ့ (Level4အဆငျ့အတနျး အဖွဈ သတျမှတျထားတဲ့ ပွိုငျပှဲ အမြိုးအစားက3မြိုးအထိ ရှိပါတယျ။ အဲဒီ ပွိုငျပှဲတှေကေတော့ –
3. Future Series တို့ ဖွဈပါတယျ။
ပွိုငျပှဲ တဈခုကို ကငျြးပဖို့ အတှကျ ခေါငျးစဉျက International Challenge လို့ သတျမှတျလိုကျရငျ ၊ အဲဒီ ပွိုငျပှဲကနေ ခြီးမွှငျ့မယျ့ ဆုကွေး ပမာဏဟာ အနညျးဆုံး ဒျေါလာ 25000 ပေးအပျရပါတယျ။ အဲဒီ 25000 ပမာဏ ဟာ စုစုပေါငျး ဆုကွေး ပမာဏမြိုး ဖွဈပွီး (အမြိုးသမီး တဈဦးခငျြး ၊ အမြိုးသား တဈဦးခငျြး ၊ အမြိုးသမီး နှဈယောကျတှဲ ၊ အမြိုးသား နှဈယောကျတှဲ နဲ့ အရော (ကြား + မ) ) ဆိုတဲ့ ကဏ်ဍ5ခုမှာ ခှဲပွီး ခြီမွှငျ့လရှေိ့တာပါ။
ပွိုငျပှဲကို International Series လို့ ခေါငျးစဉျတပျလိုကျရငျတော့ ဆုကွေးက အနညျးဆုံး ဒျေါလာ 10000 ပေးရပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ မွနျမာပွညျမှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ Myanmar International Series 2019 ပွိုငျပှဲဟာ ဒီခေါငျးစဉျအောကျမှာ ရှိတဲ့ ပွိုငျပှဲမြိုး ဖွဈပွီး ၊ သကျထားသူဇာဟာ အမြိုးသမီး တဈဦးခငျြးပှဲစဉျမှာ တတိယဆု ရရှိခဲ့တာကွောငျ့ ဆုကွေး အဖွဈ 145 ဒျေါလာ လကျခံရရှိသှားခဲ့ပါတယျ။ အမြိုးသမီး တဈဦးခငျြး ပွိုငျပှဲမှာ ပထမဆု ရရှိတဲ့ ဖာမာဝါတီ (အငျဒိုနီးရှား) ကတော့ ဆုကွေး 750 ဒျေါလာ ရရှိသှားခဲ့တာပါ။
Future Series ခေါငျးစဉျ နဲ့ ကငျြးပတဲ့ ပွိုငျပှဲကတော့ အထကျဖျောပွပါ ပွိုငျပှဲ အမြိုးအစားတှထေကျ နိမျ့ပွီး ၊ ဆုကွေးကို အနိမျ့ဆုံး သတျမှတျမထားသလို ၊ အဓိက အားဖွငျ့ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ သတျမှတျခကျြ တကျဖို့ အတှကျ လာရောကျ ယှဉျပွိုငျကွတဲ့ ပွိုငျပှဲမြိုး အဖွဈသာ သတျမှတျကွတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့လဲ ဒီလို ပွိုငျပှဲတှမှော ကမ်ဘာ့အဆငျ့ သတျမှတျခကျြ 100 အတှငျး ရပျတညျတဲ့ ကစားသမားတှတေောငျ လာရောကျ ယှဉျပွိုငျခွငျး မရှိတာပါ။
သကျထားသူဇာကတော့ ဒီပွိုငျပှဲရဲ့ အမြိုးသမီး တဈဦးခငျြး ကဏ်ဍမှာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ရပျတညျမှု အမွငျ့ဆုံး ဖွဈလို့ ဘိုငျ ရကာ ၊ 16 ယောကျ အဆငျ့ ရှုံးထှကျ အဆငျ့ ကနေ စတငျ ယှဉျပွိုငျ ကစားခှငျ့ရရှိခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီ အဆငျ့မှာ တိုငျပေ က ကစားသမား ယိဇုဂြိုး (ကမ်ဘာ့အဆငျ့ 754) ကို 21-8 ၊ 21-16 နဲ့ အနိုငျ ကစားပွီး ကှာတားဖိုငျနယျ အဆငျ့ကို တကျရောကျနိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ကှာတားဖိုငျနယျ အဆငျ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျမှာတော့ သကျထားသူဟာ ဟာ အနညျးငယျ ပှဲပနျးသှားခဲ့တယျလို့ ဆိုရမှာပါ။ သူမဟာ အမြိုးသမီး နှဈယောကျတှဲ ပွိုငျပှဲမှာလဲ လှိုငျမှနျကွူ နဲ့ တှဲဖကျ ယှဉျပွိုငျဖို့ စာရငျးပေးထားခဲ့တာကွောငျ့ အဲဒီနမှေ့ာပဲ နှဈယောကျတှဲ ပှဲစဉျရော ၊ အမြိုးသမီး တဈဦးခငျြး ကှာတားဖိုငျနယျ ပှဲစဉျရော ကစားခဲ့ရပါတယျ။
နှဈယောကျတှဲ ပှဲစဉျမှာ သီရိလင်ျကာ က အတှဲကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး ၊ ကှာတားဖိုငျနယျ ပှဲစဉျမှတော့ သီရိလင်ျကာ က ကစားသမား ဟနျဒါဟီဝါ (ကမ်ဘာ့အဆငျ့ 330) ကို 21-15 ၊ 21-12 တို့နဲ့ အနိုငျယူပွီး ဆီမီးဖိုငျနယျကို တကျရောကျသှားခဲ့ပါတယျ။
ဆီမီးဖိုငျနယျ အဆငျ့မှာတော့ အိန်ဒိယာ က မနျဒါဒါ (ကမ်ဘာ့အဆငျ့ 148 ) ကို 21-10 ၊ 21-10 ရလာဒျတှေ နဲ့ ကစားပွီး ၊ ဗိုလျလုပှဲကို ဆကျလကျ တကျရောကျသှားခဲ့ပါတယျ။ ဗိုလျလုပှဲမှာတော့ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ သတျမှတျခကျြတောငျ မရသေးတဲ့ အန်ဒိယ သူ ဘနျဆော့ နဲ့ ဒီကနမှေ့ာ ယှဉျပွိုငျ ကစားသှားမှာပါ။